Ọrụ ebube "Milagrosa" Pendant CZ Halo (14K) - Popular Jewelry
Ọrụ ebube "Milagrosa" Pendant CZ Halo (14K)
41 (mm)49 (mm)79 (mm) Nke | Ogo (mm) |:
Agba / 41 (mm) - $ 430.79Agba / 49 (mm) - $ 689.99Agba / 79 (mm) - $ 1,798.79 Iche:
Onye nchekwa Cuba dị ọcha n'ụdị amara amara ya na cubic zirconia halo.
Ogo: Elu: 41 mm, 49 mm, 79 mm
Ibu ibu: ~ 5.5, 9.9, 27.20 grams *
38mm milagrosa na yinye
Nnọọ obi ụtọ! Mbupu dị ngwa ngwa. Oge na ọmarịcha ọrụ enyi na email. N'ozuzu oke ihe omuma.